Mogadishu Journal » Weeraryahanka Liverpool Sadio Mane ayaa laga helay COVID-19
Liverpool ayaa weyn doonta Sadio Mane oo wajahaya Aston Villa Axada ka dib markii ciyaaryahanka reer Senegal uu tijaabiyay COVID-19.
Sadio Mane ayaa laga helay cudurka loo yaqaan 'coronavirus' waana is faquuqa sida ay xaqiijisay Liverpool.
Kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa sheegtay in Mane uu soo saaray calaamado yar-yar isla markaana uu karantiil geli doono muddada loo baahan yahay, taasoo ka dhigeysa inuu ka maqnaanayo kulanka Axadda ee Aston Villa.
Ciyaarta xigta ee Liverpool kadib fasaxa xulalka waa kulanka Merseyside derby ee ay la ciyaarayaan Everton 17-ka October.
Mane ayaa ah xubintii labaad ee Reds ee qandaraas la gashay COVID-19, iyadoo saxiixa cusub ee Thiago Alcantara uu sidoo kale tijaabiyay isbuucaan.
Qoraalka Liverpool ayaa lagu yiri: “Sadio Mane wuxuu tijaabiyay COVID-19 wuxuuna haatan iskiis u go'doomay sida ku cad tilmaamaha lagama maarmaanka ah
Weeraryahanka, oo bilaabay oo shabaqa soo taabtay kulankii ay Isniintii 3-1 uga badiyeen Arsenal, wuxuu soo bandhigay astaamo yar yar oo virus-ka ah laakiin wuxuu dareemayaa caafimaad wanaagsan guud ahaan.
“Si kastaba ha noqotee, sida Thiago Alcantara, Liverpool Football Club waa - wayna sii socon doontaa - waxay raaci doontaa dhamaan borotokoollada la xiriira COVID-19 Mane ayaana iskiis u go'doomin doonaa waqtiga loo baahan yahay."